Ingabe uJack Whitehall Gay? Kuchazwe Umlingiswa KaJungle Cruise Oyisitabane! - Izindaba Ezintsha
Ingabe uJack Whitehall Gay? Kuchazwe Umlingiswa kaJungle Cruise Oyisitabane!
Esithombeni esisha se-Disney se-adventure 'Jungle Cruise,' umlingisi waseBrithani u-Jack Whitehall waneliseke ngobunikazi bakhe bobulili obufanayo. Lo mlingisi uphinde ahlonipheke kakhulu ekuphatheni kwakhe isimo esizophuma kule filimu, naphezu kokuthi inkulu kakhulu.
Ufuna ukwenza ifilimu noma ubani angaxhumeka kuyo futhi ahlobane nayo, kwengeza u-Whitehall.
Le filimu, egqugquzelwe iholide elikhumbulekayo le-Disneyland, inkanyezi u-Whitehall ehambisana no-Emily Blunt no-Dwayne Johnson, kanti u-Whitehall odlala uMcGregor, umfowabo kaLily.
Esigcawini lapho uMacGregor noFrank bejabulela isiphuzo, ubuntu babo buyagqama, ngaphandle kokusetshenziswa kwegama elithi gay.
UDwayne Johnson waphawula, Bekuvame ukuba kubalulekile kithi ukuthola ukuthi okwesibili futhi simane nje kube ngabantu ababili abaphuza isiphuzo, sixoxa ngezindaba nabantu ababathandayo.
Bengicabanga ukuthi ukusebenza kukaJack endaweni yesigameko bekucashile ngokwedlulele, isihlabani sika-Emily Blunt sitshele i-AP. Ngamane ngacabanga ukuthi kwaba isigameko esilula esithinta inhliziyo, waqhubeka uBlunt.
U-Whitehall uqhubeke wathi, Cishe kuwushintsho olungcono kakhulu lwamasiko ngoba singaba namafilimu nokuzijabulisa okujwayelekile okulingisa umhlaba esihlala kuwo. U-Whitehall, okubikwa ukuthi ubengazi ukuthi umlingiswa wakhe uyisitabane ngesikhathi ethola le ngxenye, kwengeza, Cishe kuwushintsho olungcono kakhulu lwamasiko ngokuthi singaba namafilimu avamile nokuzijabulisa okulingisa umhlaba esihlala kuwo.
UJack Whitehall Uyaziqhenya Ngomuntu Wakhe Wezitabane
Ngenkathi umlingisi kaMcGregor kuJungle Cruise eqala ukulingisa, uJack Whitehall uthi ubengazi ukuthi umlingisi kaMcGregor ubutabane.
UJack Whitehall uvula isifuba ngokudlala umlingiswa oyisitabane #JungleCruise , begcona isigcawu esibalulekile efilimini okwakucatshangwa ngaso futhi kwakhulunywa ngaso kakhulu ngemuva kwezigcawu. pic.twitter.com/AL8RjJScsL
- Okunhlobonhlobo (@Variety) Julayi 26, 2021
Lapho ngiqala ukubuka indawo, kwakunemibono embalwa nje, umlingisi waseBrithani wangitshela embukisweni wokuqala wefilimu e-Disneyland. Hhayi-ke, abukho ubufakazi balokho. Bekukade kuyinqubo ende yokulingisa.
UMcGregor uphumela ephoyiseni, uFrank, odlalwa nguDwayne The Rock Johnson, esithombeni esiqondiswe nguJaume Collet-Serra, esigqugquzelwe uhambo olukhumbulekayo lweDisneyland lwegama elifanayo.
Yize engasebenzisi igama elithi gay, uthi kudingeke ukuthi ahlukane nezintokazi ezintathu ngenxa yokuthi ngenhlanhla izinto azithandayo bezikwenye indawo. Uqhuba uthi ubengenza noma yini udadewabo uLily (Emily Blunt) ngoba uyena yedwa owama naye ngesikhathi elahlwa umndeni wakhe nabangani ngenxa yokuba khona komuntu amthandayo.
Ngemva kwalokho, uFrank uphakamisa ingilazi ukuze abingelele kwenye indawo. Ngicabanga ukuthi bekuwuchungechunge olubhalwe kahle kakhulu, futhi esimane sicabanga ngalo futhi sixoxe ngalo, wengeza uWhitehall.
U-Whitehall ubengakasiboni isinqamuleli sokugcina sefilimu ngesikhathi sikhuluma ngaphambi kombukiso wokuqala, kodwa bathi, ngithemba ukuthi ukulandelana okutholwa ngababukeli. Eqinisweni, ngangivame ukuziqhenya ngomsebenzi esasiwenzile ngaleso sikhathi.
Khonamanjalo, uWhitehall uveze ukuthi umama wakhe, umlingisi uHilary Gish, wamsiza ekutholeni le ndima ngemuva kokulalela i-self-tape kaJohnson.
Funda kabanzi : Yini Oyaziyo NgeVanguard Movie
The Rock yenziwa ngumama, echaza. Bekukade kungakholeki. Wenza konke, ngisho nezwi likaThe Rock. Wenza ihlaya ngokuthi ubezama ukuthola umsebenzi wokuba ngomunye wabamele uJohnson ngoba ifilimu yashuthelwa eHawaii:
Ngeshwa akalutholanga ucingo; kodwa, kwaba yimpumelelo ngoba ngakwazi ukuthola ingxenye.
Ku-Disney Plus, ungabuka i-Jungle Cruise.
Hlala ubukele ukuze uthole ulwazi olwengeziwe!
Re: Zero Isizini 3: Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi!